» आधुनिक र वैकल्पिक चिकित्सा सँगसँगै लैजानुपर्छ : डा वसन्त पन्त [अन्तर्वार्ता]
आधुनिक र वैकल्पिक चिकित्सा सँगसँगै लैजानुपर्छ : डा वसन्त पन्त [अन्तर्वार्ता]
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०७:२६
माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल खुलेको १० वर्ष भयो। न्युरोसम्बन्धी विभिन्न उपचार गर्दै आएको यस अस्पतालले पाँच वर्षदेखि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पनि सुरु गरेको छ। आधुनिक र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका विषयमा वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा वसन्त पन्तसँग गरेको कुराकानीः
अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले वैकल्पिक चिकित्सा कहिले सुरु गरेको हो?
अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल स्थापना भएको १० वर्ष भयो। हामीले वैकल्पिक चिकित्सा सुरु गरेको चाहिँ पाँच वर्ष भयो। वैकल्पिक चिकित्सासँगको मेरो सम्बन्ध लामै हो। पहिला पनि मैले प्राकृतिक चिकित्साका डाक्टरहरुसँग रिफरल केसहरु गर्थें। मेरा लागि नयाँ होइन ।
यहाँ केके सुविधा छन्?
हामीकहाँ विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा सेवाहरु प्रदान गरिन्छ। अकुपञ्चर, स्नेहन स्वेदन, नश्या थेरापी, एनिमा, मोक्सा, योग, ध्यान सिरोधारा लगायतका सेवा हामीले सर्वसुलभ रुपमा बिरामीलाई प्रदान गर्दै आएका छौं। यहाँ धेरैजसो बिरामी अकुपञ्चरका लागि आउने गरेका छन्।
आधुनिक चिकित्सा प्रयोग गरिरहेको डाक्टर वैकल्पिक चिकित्सामा कसरी आउनुभयो?
वैकल्पिक चिकित्साको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ। अझै यसको भित्रैसम्म जाने हो भने मेडिटेसन, योगाले शरीरलाई एकदम राम्रो गर्छ। यिनीहरु प्रिभेन्टिभ मेडिसिनभन्दा पनि माथि छन्। वैकल्पिक चिकित्साले स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ।
वैकल्पिक चिकित्सा र आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै लैजानुपर्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिविरुद्ध वैकल्पिक चिकित्सा होइन। कत्ति वैकल्पिक चिकित्साका राम्रा चिजहरु हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ।
वैकल्पिक चिकित्साका लागि हामीले अर्को नयाँ भवन बनाउने विचार गरेका छौं, जसमा ठूलो वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र बनाउँछौं। जापान, चीनले पनि यसरी नै अभ्यास गरिरहेका छन्। हामीले यहाँ सुरु गरेपछि अरु अस्पतालमा पनि वैकल्पिक चिकित्सा पनि राख्ने तयारी गरिराखेको सुनेका छौं।
वैकल्पिक चिकित्सामा हामीले सफलता हासिल गरिरहेका छौं। हाम्रो सेवाबाट बिरामीहरु पनि सन्तुष्ट पाएका छौं। वैकल्पिक र एलोपेथिक दुवै चिकित्साको आआफ्नै महत्व छ। हामीले एकअर्काको राम्रो कुरा लिने हो। रोकथाम र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्यका लागि वैकल्पिक चिकित्सा राम्रो छ। त्यसैले पनि न्युरो अस्पतालमा हामीले यो सेवा सुरु गरेका हौं।
वैकल्पिक चिकित्सा किन महत्वपूर्ण छ?
मेरो बुझाइ के हो भने, वैकल्पिक चिकित्सा र आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै लैजानुपर्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिविरुद्ध वैकल्पिक चिकित्सा होइन। कत्ति वैकल्पिक चिकित्साका राम्रा चिजहरु हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अहिले युरोप तथा अमेरिकाले प्रयोग गरिसके। हामीबाट नै सुरु भएको वैकल्पिक चिकित्सा हामीले नै त्यागेका छौं। वैकल्पिक चिकित्सा सस्तो पनि छ र यसको हजारौं वर्षको इतिहास पनि छ।
यो चिकित्सा पद्धतिमा अर्धशिक्षित मान्छेहरु लागिपरेका छन्। जसले वैकिल्पिक चिकित्साको गौरवमा कमी ल्याइरहेको छ। मेडिकल अभ्यास गर्नुप¥यो भने लाइसेन्सविना काम चल्दैन। तर, वैकल्पिक चिकित्सामा अलिअलि जानेपछि हात हालिहाल्छन्। त्यसैले यो चिकित्सामा सजिलै विश्वास नभएको हो। त्यसैमा पढेर राम्रो अभ्यास गरेर आउनुप¥यो अनि मात्र जनताले पनि विश्वास गर्छन्।
हामीकहाँ नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने निकाय राम्रो छैन। त्यसैले वैकल्पिक चिकित्सामा गलत मान्छे प्रवेश गरिरहेका छन्।
वैकल्पिक चिकित्सामा झोले डाक्टर भएकोले बदनाम भएको हो। पश्चिमी चिकित्सामा पनि ‘निड्लिङ टेक्निक’ अहिले धेरै प्रयोग गरिन्छ, जुन अकुपञ्चर जस्तैजस्तै हो। अकुपञ्चर एनेस्थेसिया मात्र दिएर एक थोपा पनि औषधि नदिई मान्छेको ओपन हर्ट सर्जरी गरिएको चीनको उदाहरण हामीसँग छ। यो विज्ञान नभए के हो त?
समाजमा हरेक चिजको केही न केही अर्थ हुन्छ। त्यो सकारात्मक अर्थलाई ल्याउनुपर्छ। हाम्रो ठाउँबाट सुरु भएको चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीकहाँ नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने निकाय राम्रो छैन। त्यसैले गलत मान्छे यसमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अब वैकल्पिक चिकित्सा र आधुनिक चिकित्सामा संयुक्त रुपमा काम गर्ने बेला आएको छ।
यो चिकित्साबाट न्युरोको बिरामीलाई कस्तो फाइदा छ?
वैकल्पिक चिकित्साले स्ट्रोकका बिरामीलाई राम्रो गर्छ। टाउको दुख्नेदेखि हेड इन्जुरीका बिरामीलाई पनि यसले राम्रो गर्छ। निद्रा राम्रो नलाग्ने, तनाव लिने मानिसका लागि पनि फाइदाजनक छ वैकल्पिक चिकित्सा। कहिलेकाहीं दिसा राम्ररी नहुने, अड्किने जस्ता बिरामीलाई पनि यसले फाइदा गर्छ । बाथसँग सम्बन्धित रोगहरुमा पनि यसले राम्रो गर्छ। गाइनोको लागि पनि यो चिकित्सा पद्धति उपयोगी छ। मानसिक रोगबाट गुज्रिरहेकालाई योग र ध्यानले निकै फाइदा गर्छ।